ရေသာများပီး ငါးမရှိ No fish in the big pond. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ရေသာများပီး ငါးမရှိ No fish in the big pond.
ရေသာများပီး ငါးမရှိ No fish in the big pond.
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 21, 2015 in Opinions & Discussion | 12 comments
မျိုးစောင့် အုပဒေကြမ်းကို အောက်လွှတ်တော်မှာ လွှတ်အမတ် အများစုမဲနဲ့ အတီပြုလိုက်ကြောင်း မနေ့ဂ ဖတ်ရတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီက လွှတ်အမတ် အာလုံး ထောက်ခံမဲပေးသတဲ့။ ကြားနေလို့ ရလျက်နဲ့ ဘာကြောင် ရက်ဆား လုပ်ရသလဲ.. နားမီလည်။ ကျောင်းသားသပိတ် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခံရတယ်.. လွှတ်တော်ထဲ ဘာသံမှ မထွက်၊ လက်ပံတောင်း အရေးအခင်းမှာ လယ်သူမကြီးဒေါ်ခင်ဝင်းသေတယ်.. တုပ်တုပ်မျှ မှီလှုပ်.. အလုပ်သမားတွေ အဆော်ခံရတော့လည်း စောင်းငဲ့မကြည့်..။ အဲ… ထောက်ခံမဲ ပေးတာတော့ရှိတယ်၊ ဖွတ်အမတ် ဦးအောင်တောင်းကို ယူအက်စ်က မလိုလားအပ်သူစာရင်း ကြေငြာတော့ ကန့်ကွက်ကြောင်းအစို ထောက်ခံပေးသဗျ။ ခုလည်း မှောက်ခံ (မှားလို့) ထောက်ခံပြန်ပီ။ အမတ်၃၅ယောက်စလုံး ထောက်ခံစိုဒေါ့ အားလုံးသဘောလား တယောက်ထဲသဘောအတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးခဲ့သလား၊ စဉ်းစားမိအိ။
အုပဒေကြမ်းကို ဖွတ်၊ ၉၆၉နဲ့မဘသတွေ စလုပ်ကထဲက ကန့်ကွက်တာဆိုတော့ အနည်းဆုံးတော့ ကြားနေမဲ လုပ်လိမ့်မည်ထင်တာ.. အခုတော့ ဘာတွေဖျစ်…။ အကွက်တွေ တကွက်ပီးတဂွက်မှား.. ဆက်ခါ ဆက်ခါမှား..။ တော်သေးတာပေါ့.. စစ်တပ်ဖက်မှာ ထောက်ပြုတ်ဗိုခင်ညွန့် မရှိတော့လို့..။ ဗိုခင်ညွှန့်နဲ့သူ့ထလရအဖွဲ့သာ ဘပြောင်နေရာမှာစို ဒီမိုတို့ ယခုအချိန် ဘုံပျောက်ပီ။ သမဒဂျီးဥခင်ညွှန့်နဲ့ ဝိုင်းမလိုက်မည့်.. သပ်ချောင်များ.. ဆိတ်စွမ်းအားရှင်များ…။
ပြသနာက နိုင်ငံတဂါကိုလည်း လစ်ဘရယ်စိုပီး မျက်နှာလုပ်ခြင်.. စစ်တပ်ကိုလည်း မျိုးခြစ်ကြောင်း မျက်နှာလုပ်ပြ.. ဒီတော့ မူဝါဒ မရှင်းလင်း.. ဟိုကပ်လိုက် ဒီကပ်လိုက်.. ဘာမှ အဖတ်မတင်။ ဘက်မျှလုပ်တာက စနစ်ပြောင်းခေတ်ပြောင်း တပ်ဦးခေါင်းဆောင်ဘဝနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။ စစ်တပ်သတ်ကွင်းထဲဝင်ပီး လွှတ်တော်လမ်းကြောင်း နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါ တခုခု အပြတ်ရွေးရမည်။ ရွေးတယ်စိုဒါ လက်ဝဲ၊ လက်ယာ ဘာစွန်း၊ညာစွန်း တသတ်မှတ်ထဲ ဖြစ်စရာမလို။ တိကျ ပြတ်သား ရှင်းလင်းတဲ့ မူဝါဒ ရှိဖို့ပြောတာ။ စကားလုံး အကြီးတွေပြောနေလို့ မပီး။ အာဏှာ မရှိလို့ လက်တွေ့ လုပ်မပြနိုင်ပေမည့် ရေရာတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် ရှိရမည်။ ဥပမာ – တရုတ်စီမံကိန်းတွေ ဘယ်လိုသဘောထားမှာလဲ။ စစ်တပ်ရဲ့ မတော်မတရားလုပ်မှုတွေ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ မျိုးစောင့်အုပဒေ ထောက်ခံသလား၊ ကန့်ကွက်သလား။ အာဏှာရလျင် ဘာဆက်လုပ်မည်နီး။ တချုိ့အချက်တွေမှာ ဘွားဒေါ်၈ျီး သူအာဏှာရလျင် ကိုယ်ရှုးကိုယ်ပျံမပက်အောင် အသာချိုနေတယ်လို့ ထင်တယ်။ လွှတ်တော်ကို အကြပ်ကိုင်ခွင့် မရှိ စိုဒါမျိုးပေါ့။ အဲဒမှာ မေးချင်တာ အာဏှာတဂယ် လွှဲပေးမည်၊ အာဏာရပါတီ ဖျစ်လိမ့်မည် ထင်နေသလား။
ဘွားဒေါ်ကို ဩဇာညောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ ဦးဝင်းတင်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး မရှိတော့တာ ပါတီအတွက်သာမက တိုင်းပြည်အတွက်၊ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဆုံးရှုံးမှုပဲ။ ရွေးဂေါက်ပွဲ ရည်မှန်းတယ်စိုလဲ အချိန်နီးလာပြီမို့ ဘာအရောင်လဲ၊ ဘာစတိုင်လဲ လက်တွေ့ဘဝဒွေနဲ့ ထင်ဟပ်ပြဖို့ လိုနေပြီ။ နောက်လာဒဲ့သရဲ ဒိုင်းဝံထက်ကဲ မဖြစ်ကောင်းပါရဲ့..။
မြန်တျန့်နိုင်ငံရေး သူ့ခမိန် ငါကွ ဦးကြောင်ကြီး
ဒီတစ်ခါတော့ တော်သား ဟ
ပျံလာခဲ့ပါ သုထမီကြောင် …
​ရေထဲ ငါးမယှိ​ဒေါ့လည်း ​ရေသန့်​ဒါ​ပေါ့ဂျာ ။ ​တော်​ကျာ ငါး​ဒွေကခြီးပါချရင်​ ​ယေ​ဒေညစ်​ပပ်​ ကုံမှာ
အတွေးအခေါ်ရော ပေါ်လစီပါ စွယ်စုံရတဲ့
အဲလေ လက်တွေ့ အကူညီရဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ရေများပေမယ့် အကောင်ကြီးပြီး အစွမ်းထက်တဲ့
အလုပ်မချိ ကြောင်ရေချိုးနေသည့် ဘခင်ညွှန့် လက်ထက်ကြွင်းကျန်
စီအိုင်အေစပိုင် ဆိတ်ဖလွှိုက်စွမ်းအားရှင် ကြောင်ကြီး ကွစ်..
ကျနော်ဆိုရင်တော့ ထမိန် အဲလေ စကတ်စွန်တောင်ဆွဲပီး cat cat လန် ရန်တွေ့ပစ်မာ…
ဘွားဒေါ်ကတော့ ဘာလို့အိလိုလုပ်သလဲ ဥာဏ်မမှီ… အန်းနီးဝေး သူကလွဲပီး သောက်ကောင်းပြော ထောက်ခံရမဲ့သူလဲ မတွေ့သေးတာမို့ သူ့ထမိန်စပဲ ဆွဲလိုက်ပါမယ်
. ပြောချင်တာ ပြော။
သီချင်း တစ်ပုဒ် နားထောင် နေတယ်။
အမှန်တော့ ခရစ်ယာန်ဘုရား သီချင်းပါ။
God နေရာမှာ Su ထည့် ဆို နေတယ်။
ကိုယ့်ထက် စိတ်ဓာတ် ရေးရာ မှာရော၊ ပညာဉာဏ် မှာရော၊ ကြိုးစား အားထုတ်မှု မှာရော၊ တိုင်းပြည် ကို စေတနာ ရှိတဲ့ နေရာမှာပါ အများကြီး အပုံကြီး တော်တဲ့ သာ ထက် လူသား မိန်းမ တစ်ယောက် ကို ပူဇော် အားကိုး တာ။
ဒါပေမဲ့ သေချာတာ က အဲဒီ မိန်းမ ကို worship လုပ်နေတဲ့ ဒီ မိန်းမ ကလဲ နလပိန်းတုံး မိန်းမ ခပ်ညံ့ညံ့ နဲ့ သူများ တွေ က ပင့်တင် ပေးမှ လောက ထဲ မှာ ရပ် နေနိုင်တဲ့ မိန်းမ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာဘဲ။
worship လုပ်သင့် လို့ ကို တမင် လုပ် နေတာ။
ငှဲငှဲငှဲငှဲငှဲငှဲငှဲ (ငါကွ) ခွက်ဒစ် – ကြောင်စုတ်
Strength will rise as we wait upon the “Su”
We will wait upon the “Su”
Our Su, You reign forever
You are the everlasting Su
The everlasting Su
(နားထောင်ကြည့် ၊ နားထောင် လို့ ကောင်း တယ်၊ စု ကို မြင်ပြီး နားထောင် ကြည့် ကြောင်ကြောင်။ အစ်မ စကား နားထောင်နော်) :))
(ခွက်ဒစ်တူ ဘမ်ဘူး) :))
သများ ဆို ထမိန် အခိုင် ဝူး။ :)) lol:-))))))))
.ဒီသတင်းမှန်တယ်ဆို ကျုပ်လည်း အံ့သြတယ် :b:
.သြော် ကကြောင်ရယ်။ Manyasaint has had to succumb to the devil’s pact of political compromise. လို့ ဖြေပေးရင် ရမလား။